Wednesday May 18, 2022 - 14:24:31
Iyadoo dhawaan xilka madaxtinimo DF Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayuu durba wuxuu ku dhawaaqay in shaqada ugu horreysa ee uu qabanayo ay tahay xoojinta iyo adkeenta xiriirka kala dhaxeeya Itoobiya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladiisu howsha ugu horraysa ee ay wax qabanayso ay tahay sidii ay u qancin lahaayeen cadowga Soomaaliya ee Itoobiya, isagoona balanqaaday in xiriirka labada dhinac uu kor u qaadi doono inta uu talada hayo.
Madaxweynaha cusub ee DF-ka ayaa uga mahad celiyay RW Itoobiya Abiy Ahmed tahanniyada uu u soo diray ee ku aadaneed Doorashadiisi bartamihii bishan.
Dhanka kale Abiy Ahmed oo hadlay ayaa sheegay in ay si dhow ula shaqeen doonaan dowlada cusub ee ka dhalatay magaalada Muqdisho uuna bogaadinayo guusha Xasan Gurguurte.
War shalay ka soo baxay wasaarada Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa lagu sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay kawada shaqeyn doonaan sidii loo dhisilahaa guddi heer wasiirro ah oo laba dhinac ah kuwaasi oo hadafkoodu yahay kor uqaadida xiriirka laba dowladood taasoo ku aadan dhinacyo badan oo laba dhinac iska kaashan doonaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu xasuustaa xiligii hore ee uu hayay talada dowladda in uu ahaa madaxweynihii ugu horreyey ee booqda magaalada Jigjiga islamarkaana u aqoonsada in ay tahay magaalo ay leedahay dowladda Itoobiya.
Amiirka Taliban "kama tanaasuli doono Tadbiiqinta Shareecada islaamka xataa haddii noola adeegsado Nuclear".